Wasiir ku-xigeen ka tirsan maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inuu xilkii iska casilay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir ku-xigeen ka tirsan maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inuu xilkii iska casilay (DHAGEYSO)
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay’ada, dhirta iyo daaqa ee maamulka Galmudug C/fitaax Maxamuud Axmed ayaa ku dhawaaqay inuu xilkii iska casilay, isagoona warqadihiisa is-casilaadda u gudbiyay madaxweyanaha maamulkaasi C/kariin Xuseen Guuleed.
Wasiir ku-xigeenka oo wareysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu xilka isaga casilay arrimo shaqsiyeed awgeed, isagoona tilmaamay in aanay jirin dhibaato xooggan oo kaliftay inuu xilkan iska-casilo.
Ugu dambeyn, wuxuu wasiir ku-xigeenka sheegay in maamulka Galmudug uu ka rajeenayo in xilka uu baneeyay ay u magacaabi doonaan ruux howl-kar ah, islamarkaana howsha halkaaa kasii wadi kara.
Dhinaca kale, wareegto uu soo saaray wasiir ku-xgeenka ayuu kaga codsaday madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed inuu ka aqbalo codsigiisa ah inuu xilka isaga tagaayo.
Hadaba wareegtadda uusoo saaray wasiir ku-xigeenka ayaa u qornaa sida hoose ku xusan:-
U JEEDO Is casilid
Ku- Madaxweyne ku xigeenka
Ku Godoonka Baarlamaanka
Og Wasiirka Wasaaradda
Anigoo ah C/fitaax Maxamuud Axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay’adda dhirta iyo daaqa ee dowladda gobaledka Galmudug, waxaan halkaan ku cadaynayaa maanta oo ay ku beegan tahy 22/10/2016 inaan iska casilay xilikii wasiirnimo ee aan u hayay shacabka iyo xukuumada Galmudug.
Dhabtii iyadoo aan wax dhibaato ah jirin ayaan xilkaasi isaga casilayaa arrimo shaqsiyadeed awgeed, waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyo maamulka in la iga aqbalo soo jeedintaydda ku aadan is-casilaadeyda.